Bernardo Silva oo ammaanay mid ka mid ah saaxiibadiis kooxda Manchester City – Gool FM
Bernardo Silva oo ammaanay mid ka mid ah saaxiibadiis kooxda Manchester City
(Manchester) 24 Jan 2020. Xiddiga reer Portugal iyo kooxda Manchester City ee Bernardo Silva ayaa ammaanay mid ka mid ah saaxiibadiis kooxda Manchester City.
Bernardo Silva ayaa sheegay in xiddiga reer Algeria ee Riyad Mahrez uu yahay cayaaryahan cajiib ah, isla markaana uu muujiyay samir aad u weyn bilowgiisii hore ee Man City.
Wargeyska “Manchester Evening News” ee dalka England ayaa wuxuu shaaca ka qaaday wareysi uu bixiyay Bernardo Silva waxaana hadaladiisa ka mid ahaa:
“Ugu horeyntii, Isbadelka xilli kasta waa wax adag, marka aad ka ciyaareyso Leicester City ama Monaco kaddibna aad ku biirto koox sida Manchester City ah taasi waa talaabo weyn”.
“Waa inaad la qabsataa qaabka uu ku fikirayo macalinka kooxdaada cusub”.
“Mararka qaar marka aad ka ciyaareyso horyaal cusub, heerka kalsoonida waxay noqon doontaa mid ka duwan sidii hore, sababtoo ah waxaad u baahan tahay inaad ixtiraam ka hesho asxaabtaada, taageerayaasha kooxdaada, Iyo Tababaraha”.
“Waa inaad samir yeelato, waan soo sabray, sidoo kale Riyad Mahrez, wuxuu ahaa ciyaaryahan cajiib ah, haddana sidaas oo kale ayuu sameynayaa, wuxuuna muujiyay sida uu u fiican yahay xilli ciyaareedkii hore markasta uu ciyaaray”.
“Waa arrin waqti qaadata ilaa iyo aad ka bilowdo inaad horumariso oo aad gaarto heerka aad u baahan tahay inaad gaarto”.